Ihe kpatara Tesla Model X bụ ihe ewu ewu gburugburu ụwa bụ .. Ihe kpatara Tesla Model X bụ ihe ewu ewu gburugburu ụwa nke bụ .. - LFOTPP
Ihe kpatara nke Tesla Model X bụ ihe ewu ewu gburugburu ụwa ...
Ezubere eletriki sitere na ala n’elu, Tesla Model X a rụrụ ka ọ bụrụ ụgbọ ala kachasị nchebe n’okporo ụzọ. Nnwale ọghọm nke Tesla gosiri na Model X ga-enweta akara nchekwa nchekwa 5 na mpaghara niile, SUV mbụ mere ya.
N’achọghị nnukwu inyinya mmanụ n’okpuru okpueze, Model X nwere mpaghara crumple buru ibu iji nweta ike nke mmetụta dị elu. Ọnọdụ batrị dị n’ala ahụ na-enye Model X etiti ike ndọda, na -ebelata ihe ize ndụ nke ịmegharị ọsọ na-ewu ewu na ọtụtụ SUVs. Ogidi ndị Aluminium jiri eriri nchara na-echebe ndị bi na batrị ka ha na-emeziwanye ike ụlọ.
Model X na-abịa ọkọlọtọ na nkwado mberede na akpaghị aka na mberede iji gbochie ihe ọghọm na-eme na mbụ. Tesla na-eme naanị usoro AEB ọkọlọtọ nke na-arụ ọrụ na oke ọsọ.
Model X ọ bụla na-eburu igwefoto na-atụ anya, radar, na ihe omimi 360 senar senar iji mee ka njirimara autopilot dị elu. Mmelite ngwanrọ nke ikuku nke Tesla na-emeziwanye njiri mara njiri mara atụmatụ ndị a, na-eme kawanye nchekwa na njiri mara mma dị ka Autosteer na Autopark, na-ewetakwa Model X na-abịaru nso na arụmọrụ.
Tesla Model X bụ SUV kacha ọcha n'ụwa n'ime, ọ dịkwa. Ejiri fascia n'ihu rụọ ọrụ nke na-ebute ikuku site na sistemụ ezi HEPA mbụ dị na ụgbọala nke na-enye ikuku ikuku ahụike ọkwa jupụta ụlọ ahụ, n'agbanyeghị ihe na-aga n'èzí.
N'ime Model X
Ọnụ ụzọ Model X Falcon Wing na-enye mma, ntinye, na njigide a na-enwetụbeghị ụdị ya. Ha na-enye mmeghari ahu enweghi nke oma ma tinyekwa aka n’usoro nke abụọ na nke ato. Ndị nne na nna agaghịzi achọgharị onwe ha ka ha ghara ịpịa isi nwa ha n’elu ụlọ ka ha na-edebe ha n’oche ụgbọ ala.
Ọnụ ụzọ abụọ gbara agba Falcon Wing na-emeghe wee pụọ, na-achọ naanị oghere 30 cm n'akụkụ nke ụgbọala. Onu uzo obula nwere ikike, ikike, na umu sonar inyocha gburugburu ma zere imetu ihe mgbochi n’akuku ugboala, na-eme ka o kwe omume igba ugburu.
Akpa ụgbọala na-eweta nke mbụ ụlọ ọrụ na-emeghe na-akpaghị aka na-emeghe ma na-emechi mgbe ọkwọ ụgbọala na-abịaru nso ma ọ bụ na-apụ Model X. Gini mere onye ọkwọ ụgbọala ga - eji chọọ imetụ ọnụ ụzọ ahụ aka?
Oche ndị Monopost na-aga onwe ha, na-adọkpụgharị ma na-atụgharị ihu na azụ. Ha na-ahapụ ndị njem n'ụzọ dị mfe n'usoro nke atọ ma na-enye ha ọnụ ụlọ ụkwụ dị ukwuu mgbe ha na-anọdụ ala.
Ihu ikuku ahụ dị na Model X gbatịrị na ndị na-anọ n'oche oche n'ihu. Ndị njem nke abụọ na-enwetara ụzọ mbụ gafere gafere, nwee oghere ga -aga n'ihu, na-aga n'ọnụ ụzọ nku mmụọ, na n'akụkụ ha. The windshield si anyanwụ tint ntụgharị mezue oge a na-emeghe obi.
Ikwu okwu iri na asaa kwụrụ ọtọ akpọrọ ụlọ oriri na nkwari dịka ụda n'ime Model X.
Ebe a na-eme ihe nkedo etiti 17 "na-ejikọ usoro mgbasa ozi, igodo, nkwukọrịta, njikwa ụlọ na data ụgbọ n'ime otu ihe ngosipụta. Ọtụtụ ọrụ na-enyo enyo na ngwa ngwaọrụ ma na-eme ka olu na-eme ka uche onye ọkwọ ụgbọala na-aga n'ụzọ.
Ma ọ buru ibu ma ọ dị ntakịrị, enwere ebe ịchekwa ya na Model X. Otu akpa, ihe njikwa etiti na oghere mkpuchi maka iPhone gị.
Kwesịrị ihe niile
Tesla Model X na-enye ndị njem na ibu ebe a na-enwetụbeghị ụdị ya. Ebe oche dị okpukpu atọ, akpati na azụ, yana ime ụlọ n'okpuru oche nke abụọ, enwere ndị mmadụ zuru oke, ibu na nnukwu ihe dịka bọọdụ sọlfọ na igwe kwụ otu ebe. Maka obere ebu dị arọ, Model X bụ ụgbọ ala eletrik mbụ nwere ikike tolitere 5,000 lb.
N'ime obi ụgbọ ahụ bụ powertrain eletrik gosipụtara, na-eme ka Model X dị site na 0-60 dị egwu na sekọnd 3.2 ma na-eti nnukwu ọsọ nke 155 mph, ha niile ka ha na-ewepụta ikuku efu.
Ezubere ya n'ụgbọala eletriki eletrik nke Tesla, batrị nke ala Model X na-enye ụgbọala ahụ obere ikike ndọda na oke ibu dị oke mma maka ịrụ ọrụ na njikwa elu.
Na 0.24, Tesla Model X nwere ọnụọgụ ịdọrọ kacha nta nke SUV ọ bụla na akụkọ ntolite.
Model X na-abia n'ọkwa na onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke na-edoziri ọnọdụ atọ ozugbo maka visibiliti na arụmọrụ kacha N'okpuru 45 mph, onye na-ebukọrọ ihe ndị a na-edobe ka onye ọkwọ ụgbọala nwee ike ịhụ n'elu na n'okpuru ya. Na elu dị elu na onye na-emebi ihe na-akwụghachi akụkụ ya maka arụmọrụ okporo ụzọ dị elu (+ 1.6%), na-ebuli nkesa mbuli ụgbọ ahụ. Model X bụ naanị ụgbọ ala nwere ọkpọ na-arụ ọrụ nke nwere oriọna nkwụchikwudo dị n'etiti (CHMSL).
-Gbọ na-anya ụgbọ-ala
Igwe eji igwe eji egwu mmiri na-ejikwa akara aka na aka na-ejigide iyi na-aga n'ihu na azụ azụ iji nye Model X njikwa nkewapụta na-abawanye arụmọrụ na arụmọrụ.
Akara Mbinye aka Tesla Model X na-abịa na batrị 90 kWh na-enye ndị ahịa ohere ịnya ụgbọ nke 250 kilomita n'otu ụgwọ.
Site na nọmba
Mpaghara: 250 kilomita (P90D)
Oke ọsọ: 155 mph
Nkeji nkeji iri na ise
Ike nke moto: 259 hp n'ihu, 503 hp n'azu
Torque moto: 713 lb-ft jikọtara
MPGe US: 89 MPGe (P90D)
Ibu ibu: 5,441 lbs. (2468kg)